समानुपातिकतर्फको सिट बाँडफाँट आज
काठमाडौँ, माघ २६ गते । निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको समानुपातिकतर्फ दलहरूले प्राप्त गर्ने सिटहरूको बाँडफाँट शुक्रबार गर्ने भएको छ । २०७४ मङ्सिर १० र २१ मा भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनबाट प्राप्त मत परिणामअनुसार आयोगले सिट सङ्ख्या घोषणा गर्ने प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादवले जानकारी दिनुभयो । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. यादवले दलहरूलाई नाम सिफारिस गर्न तीन दिन दिइने बताउनुभयो । उहाँले त्यसलाई सच्याउनु परेमा थप दुई दिनको समय दिने स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले फागुन २ गते राष्ट्रपतिसमक्ष प्रतिनिधिसभाको प्रतिवेदन पेश गर्ने तयारीमा आयोग रहेको बताउनुभयो ।
आयोगले नाम सिफारिश गर्न माघ २९ गतेसम्मको समय दलहरूलाई दिने भएको छ । आयोगले दलहरूलाई सङ्घीय संसद्मा महिलाको प्रतिनिधित्व कम्तीमा ३३ प्रतिशत सुनिश्चित हुने गरी नाम सिफारिश गर्न आग्रह गरेको छ ।
राष्ट्रिय सभामा ३५ पुरुष, २१ महिला
राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनमा २१ जना महिला र ३५ जना पुरुष निर्वाचित भएका छन् । ३५ जना पुरुषमध्ये अन्य समूहबाट २१ जना, दलितबाट सात जना र अपाङ्गता एवं अल्पसङ्ख्यक समुदायबाट सात जना छन् । दलगत रूपमा नेकपा (एमाले) २७, नेपाली काँग्रेस १३, नेकपा (माओवादी केन्द्र) १२, राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल २ र सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपालले २ स्थान प्राप्त गरेको जानकारी निर्वाचन आयोगले दिएको छ ।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार हरेक प्रदेशबाट तीन महिला निर्वाचित हुनैपर्ने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाअनुसार, राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनमा सात प्रदेशमा गरी २१ महिला निर्वाचित हुनुभएको छ । यसैगरी, हरेक प्रदेशबाट एक जना दलित निर्वाचित हुनुपर्ने व्यवस्थाअनुसार ७ जना दलित र हरेक प्रदेशबाट ७ जना अपाङ्गता भएका वा अल्पसङ्ख्यक समुदायबाट एक गरी सात जना निर्वाचित हुनुभएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।